Goormee ayay Arsenal dhammeystiri doontaa saxiixa Lucas Vazquez? – Gool FM
(London) 07 Luulyo 2019. Wararka ka imaanaya England ayaa sheegaya in kooxda Arsenal ay wada hadallo meel wacan maraya kula jirto kooxda Real Madrid si ay kaga soo qaataan xiddigga garabka ka ciyaara ee Lucas Vazquez.
Wararka ayaa sidoo kale tibaaxaya in Lucas ay Gunners dhammeystiri doonto saxiixiisa maalmaha soo aaddan, inkastoo loollan adag ay kala kulmeyso kooxaha kale ee adeeggiisa doonaya.
28-jirkan ayaa la aaminsanyahay inuusan qayb ka ahayn qorshaha macallinka Real Madrid ee Zinedine Zidane, ka dib markii uu lasoo saxiixday xiddigaha kala ah Rodrygo iyo Luka Jovic.
Sababaha kale ee xiddiggan ku riixaya inuu xagaagan ka tago Bernabeu waxaa ka mid ah inuu isaga doonayo inuu xubin muhiim ah ka noqdo koobka qaramada qaaradda Yurub ee Euro 2020, sidaas awgeedna uu ugu biirrayo koox uu si joogto ah ugu ciyaari karo.
Ka dib wada hadallo soo billawday toddobaadkii tagay, labada koox ayaa ku dhow isku afgarashada iibka Lucas Vazquez, iyadoo Los Blancos ay dooneyso £28.7m oo loo hormarinayo, iyo £2.7m oo dib ay ka bixin doonto Gunners.
Kooxaha Inter Milan, Bayern Munich iyo Paris Saint-Germain ayaa iyaguna doonaya adeegga laacibka reer Spain.
Ajax oo shuruud hor leh ku xirtay Juventus qorshaheeda la saxiixashada De Ligt.